विशेष – Page 33 – Banking Khabar
मर्जर नीति २०५८ र एक्विजिसन नीति २०७० गाभिए : हेर्नुस् नयाँ विनियमावलीका पाँच विशेषताहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिँदा कायम गर्ने सेयर आदनप्रदान अनुपात गणना विधिलाई थप वैज्ञानिक बनाउँदै मर्जर नीति २०५८ र एक्विजिसन नीति २०७० लाई एकै ठाउँमा गाभेर राष्ट्र बैंकले …
मुलुककै जेठो बैंकमा कर्मचारीको ‘दादागिरी’
नवराज कुँवर – नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालकै जेठो बैंक हो । यो बैंक स्थापना देखि नै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा संचालन भएको थियो । बैंकको स्थापना वि.सं. १९९४ कार्तिक २० गते भएको हो । यही बैंकको स्थापनासंगै नेपालमा औपचारिक …
समाजले दुई हजार नपत्याएकी महिला : ‘लघुवित्तबाट लखपति’
मेरो नाम सुमित्रा दर्जी हो । म रौतहतको चन्द्रनिगाहपुरमा एउटा निम्न आयस्तर भएको परिवारमा जन्मिएकी हुँ । वि.सं. २०५० सालमा काभ्रेको वडा नं.४ पाँचखालमा बस्ने टेकबहादुर दर्जीका छोरा मोतिरामसंग मेरो विवाह भयो । विवाहपछि सुख होला, राम्रो र खुसी परिवार …
नयाँ नोट कहिले पाइएला भन्ने सोच्दैहुनुहुन्छ ? असोज दोश्रो सातासम्म पर्खनुुस्
दशैँ नजिकिँदे गर्दा नयाँ नोट कहिले साट्न पाइएला भन्ने जिज्ञासामा हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईको लागि उत्तर आइसकेको छ । तपाईले अबको एक महिनाभित्रै नयाँ नोट पाउनुहुनेछ । अर्थात असोज पहिलो साताबाटै तपाईको हातमा नयाँ नोट पर्ने गरी …
चुक्तापुँजी नजिक ‘दश वाणिज्य बैंकहरु’
रुपा कोइराला । चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयावधि अब १० महिना मात्रै बाँकी छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार क वर्गका बैंकहरुले ०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । सोही निर्देशनअनुसार पुँजी बढाउने होडमा …
सेयरमा लगानी गरेर अर्बपति बन्ने ‘१० सुत्र’
सेयर बजारको राम्रो जानकारी हुनेलाई नाफा आर्जन गर्न गाह्रो छैन । सेयर बजारमा लगानी गर्नुले पनि थोरै रकमले धेरै आयको बाटो बनाउँछ । यसका लागि शेयर बजारबारे बझ्नु र आवश्यक तरिकाहरु जान्नुपर्छ । सेयर बजारमा गरिएको सानो लगानीले थुप्रैलाई अर्बपति बनाएको …
चुक्तापुँजी नजिक दश विकास बैंकहरु
अघिल्लो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरेपछि विकास बैंकहरुले त्यसप्रति खुब असन्तुष्टि जनाए । त्यतिबेला उनीहरुलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउन कठिन हुने लागेको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार ०७४ असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको न्यूनतम …
बीमा के हो ? किन गरिन्छ ? जान्नुस् यसको महत्व र आवश्यकता
नवराज कुँवर । बीमा भनेको आर्थिक नोक्सान हुँदा दिइने क्षतिपुर्तिको ग्यारेन्टी हो । तर बीमा गर्दा बिमित र बीमकबीच सम्झौता हुन्छ । कसैलाई पनि भोली के हुँदैछ भन्नेबारे थाहा हुँदैन । तर अचानक भोली जे पनि हुन सक्छ । भविष्यमा …
सर्वाधिक नाफा कमाउने ‘पाँच राष्ट्रिय बैंकहरु’
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा वाणिज्य बैंकहरुले उल्लेख्य प्रगती गरेका छन् । खुद मुनाफामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै यस्ता बैंकहरुले आफूलाई सबल सावित गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३ वटै बैंकहरुले २ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । जसमध्ये, नेपाल बैंकको …
‘शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट ऋण दिनु अत्यन्तै राम्रो कुरा’
विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा दिने एनएमबी बैंकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले स्वागत गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई …
जाजरकोटका लघुवित्तबाट करिब दुई हजार उद्यमी
सिनर्जीलाई किनेर बेष्ट फाइनान्सले साउन १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार थाल्ने
सानिमा बैंकको रेमिटयान्स सेवा मलेशियाबाट पनि
आईक्यानद्धारा सिटिजन्स बैंक पुरस्कृत
साउन १४ गतेदेखि ‘बैंकिङ ट्रेनिङ’ संचालन हुँदै
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले माग्यो ५०भन्दा बढी कर्मचारी
कामना सेवा विकास बैंकमा ६ संचालक निर्वाचित, अध्यक्षमा सुदिप आचार्य